ဇီဝဗေဒ, ဖြေရှင်းနည်းများ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းမျက်နှာအသိအမှတ်ပြု terminal, COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်အပူချိန်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း Access Control Attendance Solution, ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အတူပြောင်းလဲမျက်နှာမျက်နှာဖုံး, အဆက်အသွယ်မဟုတ်သောခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာသည့်မျက်နှာမျက်နှာဖုံး Reader တက်ရောက်ခြင်း Terminal, အဆက်အသွယ်မရှိသောခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာသည့်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးဖတ်စက်ဝိုင်, အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းမျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းတက်ရောက်ခြင်း Terminal
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး Access Control တက်ရောက်သူဖြေရှင်းချက်.
စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာ module များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်: လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း + မျက်နှာအတည်ပြုခြင်း + အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ် + အချိန်တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှု.
processor ကို: Dual Core Processor ကို(Hi3516D V300)+ 1, G မှတ်ဉာဏ် + 16G flash
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Linux operating system
သိုလှောင်ခြင်း: TF ကဒ်သိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်
ကြည့်ရှုထောင့်: ဒေါင်လိုက်ကြည့်ရှုထောင့်: 30°; အလျားလိုက်ကြည့်ရှုထောင့်: 30°
အာရုံခံကိရိယာ: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS(IMX307)
အတိုင်းအတာအကွာအဝေး: 16℃ -40 ℃ (လေမပါဘဲမိုးလုံလေလုံ)
တိုင်းတာခြင်းတိကျမှန်ကန်မှု: ± 0.3 ℃
အပူချိန် resolution: 0.1℃
အသိအမှတ်ပြုအမြင့်: 1.2~ ၂.၂ မီတာ, ချိန်ညှိထောင့်
အသိအမှတ်ပြုမှုအကွာအဝေး: 0.5~ ၁.၅ မီတာ, မှန်ဘီလူးပေါ်တွင်မူတည်သည်
အသိအမှတ်ပြုအချိန်: ထက်ငယ်သော 0.5 စက္ကန့်
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: 160,000 မှတ်တမ်းများကိုဖမ်းယူ
မျက်နှာစွမ်းရည်: 24000PC များ
မျက်နှာပြင်တောက်ပမှု: 00400 cd / m2
output ကို switching: 1 လမ်း switch ကို output ကို, အခြား GPIO port ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
ကွန်ယက်မျက်နှာပြင်: 1 RJ45 10M / 100M သပ္ပါယ် Ethernet port, Gigabit Ethernet port ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်
Wiegand interface ကို: 1ch Wiegand interface ကို input ကို / output ကို
RS485: PCB ဘုတ်တွင် RS485 interface တစ်ခုရှိသည်, ဒါပေမယ့်ခဲမရှိ
USB မှတ်အင်တာဖေ့စ: 1ch USB interface ကို
ထိရောက်သောပစ်ဇယ်များ: 2အမတ်, 1920*1080
Min illumination: F1.2 @ အရောင် 0.01Lux(ICR);F1.2 @ B / W 0.001Lux (ICR)
SNR: d50db(AGC ပိတ်)
WDR: 120db, ISP algorithm ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထိတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသည်
Web side configuration: ထောက်ပံ့
အလုပ်လုပ်စိုထိုင်းဆ: 0~ 90% ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ, အဘယ်သူမျှမငွေ့ရည်ဖွဲ့
ဆားမှုန်ရေမွှား: အဆင့် Rp6 သို့မဟုတ်အထက်
Antistatic: ထိတွေ့± 6KV, 8KV ±လေထု
စွမ်းအား: DC12V / 2A, 14.4W က(MAX)
ကော်လံ aperture: 36မီလီမီတာ
ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 260(L ကို)*136(W က)*26(တီ)မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား: 8 လက်မ IPS HD မျက်နှာပြင်
ဘာသာစကား: အင်္ဂလိပ်ကိုထောက်ပံ့သည်, အီတလီ, ဂျပန်, ကိုရီးယားသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
F-803T မော်ဒယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းတက်ရောက်ခြင်းစက်သည်ဘက်စုံသုံးလူ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းတက်ရောက်သူစက်ဖြစ်သည်။ Seabreeze SmartCard Co. , Ltd မှထုတ်လုပ်သည်။, တိကျသောအပူချိန်တိုင်းတာခြင်း + မျက်နှာအတည်ပြုခြင်း + အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ် + တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှု + mask ဖော်ထုတ်ပါ. မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းအသုံးပြုခြင်းသည်လက်ဗွေရာတက်ရောက်ခြင်းကိုအစားထိုးနိုင်သည်, လူ့အဆက်အသွယ်လျှော့ချ, ရောဂါပြန့်ပွားမှုကိုလျှော့ချပါ, အပူချိန်တိုင်းတာမှုနှင့်လက်လှမ်းမီမှုထိန်းချုပ်မှုတက်ရောက်မှုတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ပါ, ၀ န်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်စာရင်းအင်းအစီရင်ခံစာများကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, အားလုံးမျက်နှာမှတ်တမ်းများကိုအလိုအလျောက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်, အရာနောက်ပိုင်းတွင်ကာလ၌ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အလယ်တန်းစိစစ်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အဆင်ပြေသည်.
မျက်နှာချင်းဆိုင်အပူချိန်ကိုစစ်ဆေးသောမျက်နှာဖုံးသည်ဝန်ထမ်းများစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဆင်ပြေပါသည်, ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တက်ရောက်သူ. ၎င်းကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကျောင်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်, ကစားကွင်း, စျေးဝယ်မောလ်များ, ဝန်ထမ်းများပိုမိုရှိသောဆေးရုံများနှင့်အခြားနယ်ပယ်များ. Real-time ပုံမှန်မဟုတ်သောခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှိုးစက်သည် coronavirus အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုထိရောက်စွာစောင့်ကြည့်နိုင်သည်(COVID-19), အဆုတ်ရောင်ရောဂါအမျိုးအစားအသစ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖျားကခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့တိုးစေတယ်.
ဤသည်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုလက်လှမ်းထိန်းချုပ်မှုတက်ရောက်သူ device ကိုစီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာ module တွေစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်: လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း + မျက်နှာအတည်ပြုခြင်း + အသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်မယ် + အချိန်တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှု.
ပံ့ပိုးမှုအပူချိန်ဒေတာ interface ကို protocol ကို docking
မျက်နှာများကိုတိကျစွာအသိအမှတ်ပြုရန်အတွက်ထူးကဲသောတိုက်ရိုက်အသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်, မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုအချိန် 0.5s ထက်နည်းသည်
built-in ပြည်တွင်း CPU ကို
Linux operating system ကိုအသုံးပြုခြင်း, ပိုကောင်းတဲ့စနစ်တည်ငြိမ်မှု
ကင်မရာ H.265 ပင်မပရိုဖိုင်းကို encoding ကအသုံးပြုသည်, ONVIF protocol မှတဆင့် NVR နှင့်အခြားသိုလှောင်ရေးကိရိယာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
TF ကဒ်သိုလှောင်မှုကိုထောက်ပံ့သည်, ဓါတ်ပုံများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်သိမ်းဆည်းထားပါသည် 1 တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို (TF ကဒ်ပမာဏပေါ်မူတည်သည်)
ကျရှုံးခြင်း MTBF အကြားအချိန်>50000 H ကို
ထောက်ပံ့ 24000 မျက်နှာပြင်ကိုက်ညီစာကြည့်တိုက်နှင့် 160,000 မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်တမ်းများ
ကြွယ်ဝသော interface protocol ကို, TCP / IP ကိုထောက်ပံ့သည်, UDP ကို, RTP, RTSP, RTCP, သည် HTTP, DNS, DDNS, DHCP, SMTP, UPNP, MQTT protocol ကို, Windows / Linux
Built-in အလင်းအာရုံခံ, အလိုအလျောက်ဖြည့်အလင်း၏အဖွင့်နှင့်ပိတ်ချိန်ညှိ
ကြွယ်ဝသောဟာ့ဒ်ဝဲ interface (I / O, WG26, WG34, RJ45, ယူအက်စ်ဘီ)
8-IPS full-view HD display, streaking နှင့်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိပါ
Support code stream နဲ့ငါကြားကာလ setting ကိုဘောင်
2D ဆူညံသံလျော့ချခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်, 3D ကိုဆူညံသံလျှော့ချ
မှတ်တမ်းတင်အချိန်ဇယားအချိန်ကာလနှင့် upload mode ကိုချိန်ညှိပါ
ဗွီဒီယိုတောက်ပမှုကိုထောက်ပံ့ပါ, ဆနျ့ကငျြ, အရူး, ရွှဲ, gamma ညှိနှိုင်းမှု
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အတိုင်းအတာမျက်နှာအသိအမှတ်ပြုတက်ရောက်သူ Terminal ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်
prev: လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Barrier-အခမဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာညီလာခံတက်ရောက် Channel ကိုဂိတ်ဖြေရှင်းချက်
နောက်တစ်ခု: RFID မြေအောက်ပိုက်လိုင်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်, ရေနံဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ, cable, မြေအောက်နက်စွာသော induction 1.8 မီတာ
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (92)
ESL ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း Tag (9)
anti-သတ္တု Tag ကို (30)
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို (20)
PCB Anti-သတ္တု Tag ကို (7)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (30)
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို (20)
ဆက်သွယ်ရန်ကဒ် Reader ကို (6)